Muhammad Bin Salmaan ajjeechaa gaazexeessaa Jamaal Khaashoqjii irratti raawwatameef itti gaafatamummaa kan fudhatu tahuu beeksise - NuuralHudaa
Muhammad Bin Salmaan ajjeechaa gaazexeessaa Jamaal Khaashoqjii irratti raawwatameef itti gaafatamummaa kan fudhatu tahuu beeksise
On Sep 26, 2019 3
Dhaaltuun gonfoo Sa’uudii Muhammad Bin Salmaan, kanaan dura qonsilaa Istanbul keessatti “ajjeechaa gaazexeessaa Jamaal Khaashoqjii irratti raawwatame keessaa harka hin qabu” jechuun kan waakkataa ture yoo tahu, yeroo jalqbaatiif ajjeechaa Jamaal Khaashoqjii irratti raawwatameef itti gaafatamummaa guutuu kan fudhatu tahuu ibse.
Muhammad Bin Salmaan Dokumentarii miidiyaan PBS jedhamu qopheesse irratti yaada kenneen “ajjeechaan sun namoota ajaja kiyya jala turaniin raawwatame, kanaafuu itti gaafatamummaa guutuu ni fudha” jedhe. Haata’u malee Jamaal Khaashoqjii akka ajjeeffamu ajaja kan hin dabarsin tahuu hime.
Jamaal Khaashoqjii bara dabre October 2/2018 qonsilaa Istanbul keessatti humnoota tikaa mootummaa Sa’uudiitiin ajjeefamee reeffi isaa asiidiin bulbulamee kan gatame yoo tahu, hanga ammaatti mootummaan Sa’uudii haala ajjeechaa kun itti raawwatame osoo hin ibsine ture.
Dokumentariin miidiyaan PBS Frontline jedhamu, ajjeechaa Jamaal Khaashoqjii ilaachisee qopheesse guutuun isaa October 1/2019 kan bahu tahuu ibsame.
Muhammad Bin SalmaanSa'uud Arabiyaa
July 7, 2022 sa;aa 7:20 am Update tahe